अरबपति भगवान युद्ध उपन्यास अध्याय 2447 - ० | | XperimentalHamid
अरबपति भगवान युद्ध उपन्यास अध्याय १2447 - - १2448
पढ्नुहोस् अध्याय २ 2447 १-२ 2448 २ उपन्यास अरबपति भगवान को युद्ध (अनुवादित संस्करण) को नि: शुल्क।
भूत प्रेत बन्छ, जताततै अपराध, हिंसा र जताततै चोटपटक।
ज्याiang निingले आफ्नो आँखा छोडिदिए र दानव राजाको पागल शब्द सुने, र उनको आफ्नै दिमागमा दृढ संकल्प भयो। उसले दाम राजालाई सफल हुन दिनुहुन्न, उसले जे भए पनि मूल्य तिर्नु पर्दैन।
कसैको मानवता नियन्त्रण गर्न त्यहाँ कुनै तरिका छैन जब त्यहाँ बेडी छैन, कुनै नैतिक वा कानूनी झुम्का छैन।
सबैजनाको अज्ञात पक्ष हुन्छ, तर धेरै जसो केसहरूमा तपाईले यस पक्षलाई नदेखी यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
यो शान्तिको लागि एक शर्त हो।
एक पटक जब यी व्यक्तित्वहरुका स्वार्थहरु दबाएर राखिएन, यहाँ सम्म कि सार्वजनिक गरीयो, र उत्खनन गरियो, जिय N निले यसको परिणाम के हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सक्दैनन्।
"तपाईं ईच्छे सोच्दै हुनुहुन्छ!"
ज्याiang निing कराए।
"हाहाहा, यदि तपाई ईच्छे सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले छिट्टै नै थाहा पाउनुहुनेछ।" को
शैतान गर्जन, अचानक तेज, र Jiangning तिर लाग्यो।
तर ज्याiang निing चट्टानमा झुकाव थिईन्, धेरै थाकेका देखिन्थे, र हिंड्न पनि सकेनन्!
त्यो ठूलो मुट्ठी तर्फ बढिरहेको छ, पागल!
ठूलो चर्को आवाजले, ज्याiang निing जोगिन, र शैतानको मुट्ठी ढु stone्गा मा प्रहार, अचानक ढु suddenly्गा को लागी ढु crack्गा को कारण, र फोहोर उडिरहेको थियो!
"भाग्न चाहनुहुन्छ? कुनै हालतमा हुदैन!"
ज्याiang निing्ग चट्टानहरु तिर दौडेको देखेर, दानव राजाले तुरुन्तै उसलाई खेदे।
तर जब ऊ ढु r्गाको थुप्रोमा पसे, अचानक भूइँचालो भयो।
शैतानले झूट बोले र रalu्गना पालू लु जियानि श्यानि एकछिन रोकी।
उसले पछाडि फर्केर हेरे र उनले थाहा पाए कि उनी भर्खर आइपुगेको दिशा केही विशाल चट्टानहरूले रोकेको थियो, र ज्याiang निing ... हराइरहेको छ।
दानव राजाको अनुहारमा केही घृणा थियो। यस्तो देखिन्थ्यो कि ज्याiang निingले आफ्नो पासोमा फस्न को लागी जाल हाल्ने छ, वा आफैलाई मार्ने पनि छन्, तर उनले मतलब गरेनन, "के तिमीलाई लाग्छ यी कुराहरुले मलाई रोक्न सक्छ?"
"ज्याiang निing, तपाईले मलाई अति नै तल हेर्नुहुन्छ, र तपाई आफैंलाई पनि अग्लो देख्नुहुन्छ।"
"तपाईं पनि मलाई रोक्न सक्नुहुन्न, मलाई अरू के रोक्न सक्नुहुन्छ?" को
भूत राजाले अचानक आफ्नो मुट्ठी उठाए र एउटा टुक्रामा फ्याँकिए। ढु stone्गा!
बोल्डर अचानक विभाजित भयो, फाटियो!
तर चाँडै, अर्को ढु stone्गा उनको अगाडि देखा पर्‍यो। जे भए पनि दानव राजाले यसलाई कसरी भत्काए पनि, त्यहाँ सँधै एउटा ढु moving्गा घुमिरहन्थ्यो।
अचानक, तीन व्यक्तित्वहरू आए, दानव राजाका आँखा चिसो थिए, र आफ्ना विद्यार्थीहरू बगेर गए, र उनले तीन मान्छेहरू उहाँको अगाडि दौडिरहेको देखे।
ऊ रिसाएको छ!
वास्तवमै केहि सामान्य मानिस आफैंलाई मार्न दिनुहोस्?
ज्याiang निing आफैंलाई धेरै तल हेर्छन्!
म तँलाई मारिदिन्छु !" उनले भने, “म तिमीलाई पहिले मार्नेछु!”
उसले त्यसलाई नराम्रा रूपमा थप्पड लगायो, तर चित्र त्यो एकैचोटमा छाया जस्तो देखिन्थ्यो, र अचानक हरायो, र उनी भित्र पसे।
भूत राजा आश्चर्यचकित हुनु अघि, पछाडि एउटा तेज हावा चल्यो, उसको पीठमा थप्पड लगायो, उसले आफ्नो टाउको अकस्मात पल्ट्यो, तर उसले अझै यो दृश्य देख्न सकेन!
यो कसरी हुन सक्छ?
उसले स्पष्टसँग तीन व्यक्तिलाई देख्यो, तर तिनीहरू फ्ल्याशमा हराए, र तिनीहरूको पछाडि कुनै आवाज थिएन, सास थिएन। केवल जब उसले अन्तमा उसलाई हिर्कायो ऊ सास महसुस गर्‍यो।
शैतान घुमायो, उसको आँखा थाम्कायो, भारी विद्यार्थीको उज्यालो चम्काउन दिनुहोस्, ऊ अझ हेर्न चाहान्थ्यो!
"मैले आशा गरिनँ, र तपाईं विरुद्धको कानून मैले बुझिन कि तपाईंले मलाई यो पासोमा फ्याँक्नुभयो।"
"जिiang्गिंग, तपाई साँच्चिकै डोजी हुन सक्नुहुन्छ, तर दुर्भाग्यवस, तपाईले जे गर्नु भयो त्यो बेकार भयो!"
ठूलो शैतान मुस्कानका साथ, "मैले क्यान्यानको श्वास पहिले नै महसुस गरिसकेको छु, तपाईंले खेद गर्नु हुनेछ कि तपाईंले उसलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ!"
उहाँलाई के जवाफ मुट्ठी थियो!
अचानक पातलो हावाबाट बाहिर आयो र डेमन किंगको अनुहारमा यति जोडले हिर्कायो कि उनलाई प्रतिक्रिया दिन समय थिएन।
शैतानले केहि चरण पछि हटे, र उनको सामने कुनै आकृति थियो।
"हे, यस आक्रमणकारी शक्तिले मलाई कुनै चोट पुर्याउन सक्दैन, के यो कुनै मतलब छ?"
ऊ बिलकुल रिसाएको महसुस गरेन, तर त्यसले थोरै हास्यास्पद फेला पारे।
उनले पहिले नै बुझिसकेका थिए कि ज्याiang निingले केवल केही साधारण व्यक्तिहरू उसमाथि आक्रमण गर्न दिनको लागि उधारो लिइरहेकी थिइन्, चाहे उहाँ कति छिटो भए पनि सास लुकाउन के के काम आयो?
यदि ऊ यहाँ उभिएर विपक्षीलाई हमला गर्ने अनुमति दियो भने, उसले एकल वेल्सस कपालमा चोट पुर्‍याउन सकेन।
तर यो गठन, म डराउँछु म त्यो लामो समयसम्म समात्दिन सक्दिन, हैन?
जब गठन अवैध छ, कि त्यो मार्न सुरु हुन्छ!
दानव राजा एकअर्काबाट भित्र जान्छन् र समय-समयमा आक्रमण हुन्छन्, तर उसले अझै ध्यान दिएन, मानौं कि यी आक्रमणहरू उसको लागि कोर्रा मात्र भए पनि हो।
“जिiang्गिंग, तपाई आफैले बाहिर आउन पर्छ। कमसेकम तपाईसँग अझै लडाई गर्ने शक्ति छ। अन्य फोहोर बेकार छ। ”
“बाहिर आऊ, मैले भनें म तिमीलाई मार्ने छैन, म तिमीलाई यो आफ्नै आँखाले यस संसारको विनाश देख्न दिनेछु,” तिम्रो छोरीलाई हेर्नुहोस् र तिम्रो सामु मर्न पाउनुहुनेछ! ”
"मलाई यो गर्न को लागी प्रतीक्षा नगर्नुहोस्, वा तपाईं अधिक कष्ट भोग्नुहुनेछ!" को
दानव राजा पागल जस्तो कुरा गरिरहे।
डबल विद्यार्थी परिवर्तन हुँदै गयो, वरिपरि हेरिरहेको थियो, स्पष्ट रूपले हेर्ने कोशिस गर्दै को गठन मा लुकेको व्यक्ति थियो।
उसको लागि, लामो समयको लागि झी byहरू द्वारा सताइनु पनि कष्टकर हुनेछ!
ह्यारिसन र अन्यहरू गठनमा आफूलाई लुकाए। उनीहरूले दमन राजालाई २० चोटि भन्दा बढी पटक आक्रमण गरेका थिए, तर प्रत्येक चोटि उनीहरूले आक्रमण गरे तर तिनीहरूले दानव राजालाई केही पनि हानी गरेनन्।
यदि दानव राजा त्यहाँ खडा भएर तिनीहरूलाई कुट्छ भने पनि, तिनीहरूलाई दानव राजालाई मार्न गाह्रो हुन्छ!
ह्यारिसन थोरै रिसाए।
तिनीहरूको शक्ति? प्रेम भूमि Zero Er Wu Lu Zhe Wu? यो अब कमजोर छैन, साधारण व्यक्तिको नजरमा, यो केवल मार्शल आर्ट मास्टर लेवलको अस्तित्व हो।
तर शैतान सबै पछि अर्को स्तर को मान्छे हो, उसले आफ्नो रक्षा विभाजन गर्न एक तरिका खोज्न पर्छ!
उनीहरूको समूहले एक अर्कासँग कुराकानी गर्नु आवश्यक पर्दैन। Tacit समझ को वर्षहरु सबै एक अर्का के गर्न चाहन्थ्यो को बारे मा सबै स्पष्ट बनायो।
शैतानमा त्रुटि खोज्नुहोस्!
उसको भाग्य खोज्नुहोस्!
यसको लागि लगातार आक्रमणहरू र निरन्तर प्रयासहरू आवश्यक हुन्छ।
सबैको शरीर, त्यहाँ खेती गर्न नसकिने स्थान हुनुपर्दछ, त्यो छ, मृत ढोका, यो शैतान हो भने पनि, त्यहाँ हुनु पर्छ, जब सम्म तपाईं यसलाई पाउन, तपाईं यसलाई गम्भीर चोट पुर्‍याउन वा मार्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तर दियाबल राजा भय is्कर छ। यदि जियांग निingको मुट्ठी उसको शरीरमा प्रवेश गर्न सक्दछ र प्रत्यक्ष रूपमा आन्तरिक अ organs्गहरूमा आक्रमण गर्दछ भने त्यसले केवल उसलाई चोट पुर्‍याउन सक्छ, तर त्यसले शैतान राजालाई मार्न सक्दैन।
जिiang नि N पनि यस समयमा अवलोकन गर्दैछ।
यस ढु stone्गा गठनमा, ह्यारिसन मुख्य आक्रमणकर्ता हो र सबै चीज नियन्त्रण गर्दछ, तर ज्या J निing वास्तवमै सब भन्दा शक्तिशाली हत्यारा चाल हो!
"मैले यो पुरानो कुरा यति शक्तिशाली भएको साकार गर्दिन।"
जिiang निingले भने, "बाँकी आत्मालाई निको पार्ने दानव राजा लगभग अभेद्य छ।"
यदि ऊ साँच्चिकै उसको पूर्ण रूपले निको हुन पर्खिरहेको छ भने त्यो वास्तवमै सकियो। मलाई डर छ कि यो एक तोपखाल हुनेछ। ऊ मृत्युको लागि विस्फोट भयो।
यस्तो त्रास कसरी हुन सक्छ?
जियांग निingले सकेसम्म चाँडो आफ्नो शक्ति पुनःस्थापना गर्न लामो सास लिए।
ऊ बिस्तारै ठूलो ढु b्गाको पछिबाट बाहिर निस्के र राक्षस राजाको अगाडि देखा पर्‍यो।
"तपाईं ठिक हुनुहुन्छ। मैले आफैंलाई मार्नु पर्छ र अरुले तिमीलाई मार्नु पर्छ। यदि तिमी मरेनौ भने तिमीसित मेलमिलाप हुनेछैन? ”
ज्याiang निingलाई बाहिर निस्केर आइरहेको देखेर दानव राजाले हाँसो गरे, "तिमीले मलाई मार्न सक्दैनौ।"
"यो संसार, यो पहिले नै कसैले मलाई मार्न सक्दैन!"
"जसले मलाई मार्न सक्थ्यो, त्यसबेला मलाई मारियो, हाहाहा!" को
राक्षस राजाले बिस्तारै उनको टाउको माथि उठायो, गन्ध सुंघेर, उसले पहिले नै ज्याiang याओको गन्ध गन्ध र महसुस गरेको थियो। अन्तिम वसन्त यस ढु stone्गाको गठनको बीचमा छ!
जियांग नि thoughtले सोचे कि यो ढु formation्गाको गठनसँगै ऊ पनि पासोमा पर्न सक्छ?
उसको शरीरमा आभा क्रमशः परिवर्तन गर्न थाले, कडा र पागल!
एक कालो हावा उनको शरीरबाट बाहिर निस्कियो, र तुरुन्तै आफ्नो वरिपरि छाप। ज्याiang निingले आफ्नो अनुहार बदल्न सहयोग गर्न सकेनन्। दानव राजाले वास्तवमा आफ्नो शक्ति लुकायो?
“माथि कसैले मेरो उपस्थिति देखेको छैन। यद्यपि म अझ राम्ररी निको हुन सकेको छैन, म तिमीलाई देखाउन सक्दछु। " को
दानव राजाले हल्कासँग भने, "यस संसारको अप्रत्याशितता तपाई र अन्य मानवहरूले बुझ्न सक्ने कुरा होइन।"
"ज्याiang निing, तपाई पहिले नै राम्रो हुनुहुन्छ, तर दयाको कुरा छ तपाईंले मलाई भेट्नुभयो।"
"अर्को, तपाईं आफ्नो भाग्य स्वीकार्नुहुनेछ!"